Sidee internetka uga caawiyaa inay u keenaan beesha Katoolikada: Sheekooyinka ay soo saarto
Iyadoo internetka wax badan ka qabanayoee nolol maalmeedkeena: dukaameysiga, shaqeynta, firaaqada, barashada, iwm, mid ayaa laga yaabaa in ay u maleyneyso in ereyada digitalku aysan aheyn mid naxariis lehbulshooyinka. Si kastaba ha ahaatee, runta waa wax iska soo horjeeda.
In kastoo hoggaamiyeyaasha diineed badani ay walwalsan yihiinoo ku saabsan dareenka bulshada lumay ee ka dhexjirta falanqaynta internetka, Sister Catherine Wybourne, @Digitalnun on Twitter,oo ka shaqeeya sidii hore ee Oxfordshire Holy Trinity Monastery, wuxuu hubiyaa in booska webku uu u suurageliyo dadka, kuwaas oo raadinaya jawaabo weligeed ahbulshada, halkaas oo ay ku jeclaan doonaan oo ay aqbalaan Eebaha si deg deg ah.
Walaal Catherine Wybourne waxay sheegeysaa inay muhiim tahayhoggaamiyeyaasha diinta in ay ka warhahaan casriyeynta webka iyo ogaadaan sida loola shaqeeyo iyaga. Waxay keenaysaa daahfurnaan badan oo ku saabsan heshiisyadainta u dhaxaysa iyaga iyo adhinkooda, iyo sidoo kale waxay u oggolaanayaan inay gaaraan kuwa kale ee Catholics meel kasta oo adduunka ah.
Way adag tahay in la diido faa'iidooyinka iyo fursadaha internetkawaxay bixisaa marka ay timaaddo waayo-aragnimada sahaminta, baro badan oo ku saabsan diimooyinka diimeed iyada oo loo marayo goobaha, waraaqaha emailka, qolalka lagu sheekeysto iyo warbaahinta bulshadakooxaha. Inkasta oo digniinaha naceybka ah ee ku saabsan khiyaanada tiknoolijiyada internetka weli ay joogaan, bulshooyin badani waxay ku soo dhaweeyeen helitaanka aragti fiicanee arrimaha iimaanka la xidhiidha
Sare ,hay'ad suuq geyn ah oo Yurub ah ayaa ku waafaqsan, in meelo badan oo loo qoondeeyay bulshooyinka Katooliga ah iyo faafinta ereyga Ilaah muuqaalka internetka.
Hal gool, siyaabo badan
Waajibaadka wakaaladda suuqyada ee internetka waa in ay bixiyaan iftiinmashaariicda internetka oo ay ku qanciyaan dadka ay bartilmaameedsanayaan. Caawinta xarumaha shabakada ee Katooligga ah ayaa waxay sidoo kale ka helayaan Catholics onlinenoqdaan qayb ka mid ah waajibaadka saafiga ah
Semtalku wuxuu ku raacsan yahay cilmi-baaristii ugu dambaysay ee uu sameeyay Professor-kaof Texas A & M University, Heidi A.Campbell, taas oo ay sheegtay, in Church Catholic hadda waa mid ka mid ah ugu ku hawlan shabakadabannaan. Waxaa jira boggag, kooxaha warbaahinta bulshada, kanaalka YouTube, blogsyada iyo noocyada kale ee warbaahinada internetka ah, kuwaas oo la soconaya lana taageeroby by isticmaalayaasha Catholic.
Sida laga soo xigtay Semalt, waxay qabteen hawlo kala duwan oo loogu talagalay Catholicmacaamiisha, kuwaas oo doonaya inay la kulmaan xubnaha kale ee bulshada ama la wadaagaan sheekooyinkooda. Laga soo bilaabo dhismaha goob la soo bandhigo oo wargelineedonline-browsing Catholics si loo abuuro fiidiyo gaaban fiidiyowyo ,kooxda shirkaddu waxay ka caawisay dad badan oo Katoolik Kareemo ah inay internetka u galaan ayna noqdaan kuwo muuqda xubnaha xubno cusub oo u baahan kaalmo iyo hagid.
Xaafaddan ayaa dhowr jeer oo bulshooyinka Katooliguna ay isku dhex arkaan internetkawaayo aragnimo iswaydaarsiga, abaabulidda munaasabadaha sadaqada, oo lagu wadaago baraarujinta fasaxyada Katooliga iyo hagaajinta xiriirkooda guud. Habkaniisdhexgalka internetka ayaa ogolaanaya in laga saaro "derbiyada", oo loo adeegsado in ay halkaas joogaan marka aan internetka la soo gelin dunida.
Bulshada websaydhka ah ee Katooligga ah waxay ku jiraan waxyaabo badan oo ku saabsan isticmaalka internetkafursado ay bixiso Shabakadda World Wide si ay dadka isugu keenaan, dhisaan xiriirka ka dhexeeya shakhsiyaadka, jacaylka iyo fahamka u fidiyaan kuwa aaminka ah,kuwaas oo u baahan. Xaaladdan oo kale, isbeddelka Internetka uu baaray waa mid wanaagsan. Isgaadhsiinta internetku waxay dadka u dhigtaa shuruudaha siman ee u dhexeeya mid kastakuwa kale, waxay u oggolaanayaan inay noqdaan dhegeystayaal oo ay galaan wada hadal, kuwaas oo qaabeeya bulshada.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la xasuusto welwelka ugu weyn ee kuwa, kuwaas oo ka soo horjeeda diinta islaamkabulshooyinka isticmaalaya internetka oo qiraya in aaney internetka u bedeli karin isdhexgalka shaqsiyeed ee bulshada dhexdeeda. Catholics Pro-onlinemarnaba way ku guul daraystaan ​​in ay xaqiijiyaan: Internetku waa hab lagu xoojiyo iimaanka, ma beddelayso, xaqiiqdii waa ra'yi wacan in ay jiraan dad badan oo online ahShirkadaha diyaar u ah inay taageeraan iyaga dadaalkooda Source .